EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ဆန့်ကျင်ဖျက်သိမ်းခက် Tag ကို, အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို
အခြားအမျိုးအစားကဒ် / တံဆိပ်
 » EAS Store ကိုနှိုးစက်
EAS Store ကိုနှိုးစက် အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို, EAS Store Alarm Clothing Security Management EAS Hard Tag, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF ဆန့်ကျင်ဖျက်သိမ်းခက် Tag ကို, EAS+UHF Anti-theft Clothing Security Hard Tag, EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို
CR-80 85.6mm × 54mm
CR-100 98.5mm × 67mm
အထူ: 0.76မီလီမီတာ± 0.02mm
base လွှာချင်းဝက်: 3.18± 0.3mm
CR80 PVC Card အားလည်းအောက်ပါလုပ်ငန်းစဉ်အားပေးနိုငျ:
တုန့်ပြန်အကြိမ်ရေ: 125kHz / 13.56MHz / 860 ~ 960MHz
chip: M1 IC S50, M1 4K S70, ULT 10, ULT ကို C, ငါ CODE2 SLI / SLI-S / SLI-L / SLIX, Desfire2K / 4k / 8K, Ti2048, EM4102, EM4200, EM4305, TK4100, T5557, T5577, Hitag2, FM11RF08, ဂြိုလ်သား h3, Impinj M4, စသည်တို့ကို.
သံလိုက်ချွတ်: LoCo 300OE သို့မဟုတ် HiCo 2750OE / 4000OE
EAS + လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူခက် Tag ကို, is 58K and UHF electronic tags, isacombination of anti-theft and management of super-hard tag, with EAS anti-theft alarm function, but also both have UHF tag management functions. The tag not only triggers the burglar alarm, but also sends back product information for the tracking management of clothing and other managed products.
It complies with EPC C1G2 (ISO ကို 18000-6C) standards and operates at 860-960MHz (worldwide availability). Each tag hasaunique ID and stores user data. This tag can be recycled to save costs.
Tag surface printable pattern, လိုဂို, code and so on.
All kinds of products from hardware to software, including sports products, retail and management of apparel, household products, food, beauty care products, footwear, hardware tools, toys, books, audiovisual products and consumer electronic products, စသည်တို့ကို, use the source tag.
I am interested in your product EAS+UHF Anti-dismantled Hard Tag, အဝတ်အစားလုံခြုံရေးစီမံခန့်ခွဲမှုခက် Tag ကို
prev: 8.2MHz စီးရီး EAS လက်ဝတ်ရတနာများခိုးယူမှုစက္ကူ Tag, EAS လက် ၀ တ်ရတနာမှခိုးယူသည့် Soft Tag
နောက်တစ်ခု: Bluetooth ESL Electronic Shelf Tag Mobile Phone APP Management Without Base Station, EPD Screen Electronic Paper Shelf Tag
8.2MHz စီးရီး EAS လက်ဝတ်ရတနာများခိုးယူမှုစက္ကူ Tag, EAS လက် ၀ တ်ရတနာမှခိုးယူသည့် Soft Tag
EAS အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူ FM ရေဖျ Tag ကို, EAS အဝတ်အစား Anti-ခိုးယူ AM ဖျ Tag ကို, အဝတ်အစား EAS ရင်းမြစ် Tag ကို
RFID အထည်အလိပ်ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကို, RFID Nonwoven ပစ္စည်းအဝတ်အထည် EAS Tag, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF polyester ပစ္စည်းအဝတ်အစား Tag ကိုဆေးကြော
RFID Card ကို (145)
ချိတ်ဆက်မှု Chip ကဒ် (62)
HF Chip ကဒ် (30)
dual Interface Card အား / Multi ကြိမ်နှုန်း Card ကို (13)
အခြားအမျိုးအစားကဒ် / တံဆိပ် (18)
Card အားခန့် / ဆက်စပ်ပစ္စည်း (19)
NFC ကိုထုတ်ကုန်များ (20)
RFID အင်းလေး (15)
RFID ဆကျကပျ Tag ကို (75)
anti-သတ္တု Tag ကို (28)
အခွားသော Anti-သတ္တု Tag ကို (19)
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ Tag ကို / ဘိလပ်မြေ Tag ကို (8)
အခြားအ Dedicated Tag ကို (25)
စတစ်ကာ / ဆန့်ကျင်အတုတံဆိပ်တပ်ရန် (29)
EAS Store ကိုနှိုးစက် (9)
LF / HF Reader ကို (27)
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Reader ကို (18)
module / အင်တင်နာ (22)
အခြားအ IoT ထုတ်ကုန်များ (11)